Qalabka Qalabka - Liiska Faylka Fudud
Liiska Faylka Fudud ee Pro wuxuu ku siiyaa tab dheeraad ah gudaha Liiska Faylka Maamulka si uu kuu siiyo marin aad ku hesho qaar ka mid ah cillad bixinta iyo qalabka nadiifinta.
Qalabka Tab - Faylka Liiska Fudud Pro
Dib u deji Faylka
Qalabka wax lagu keydiyo ayaa ku kaydiya xogta ku saabsan fayl kasta oo ka mid ah qormo ku keydsan xogta WordPress, sida sharraxaadda, taariikhda lagu daray iyo macluumaadka milkiilaha. Waad awoodaa nadiifi dhammaan xogtan oo dib udaji liiska faylka adigoo gujinaya badhankan. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa mid waxtar leh haddii liiska faylalka uusan si sax ah u shubanayn.
Dib u deji Dejinta Liiska Faylka
Guji batoonkan si aad dib ugu dejiso habaynta liistada oo aad ugu celiso qaababkeedii aasaasiga ahaa ee plugin. Tani way ku caawin kartaa haddii aad dhibaato ku qabto liistada oo aan sidii loogu talagalay u shaqeyn. Sidoo kale, xusuusnow inaad ka saarto wax kasta Sifooyinka gaagaaban taas oo aan loo baahnayn in lagu raaco goobaha.
Tirtir Faylasha Faafida Agoonta
Tirtir thumbnails oo aan lahayn wax sawir ah ama fayl fiidiyoow ah. Tani waxay ku caawin kartaa haddii aad u guurto faylasha gudaha, dibedda iyo hareeraha banaanka qalabka. Sawirada Thumbnail waxaa lagu keydiyaa galka qarsoon (.thumbnails /) ee kujira galka liistada kasta.
Wax soo saar ceeriin
Wax soosaarka ceeriin ayaa lagu soo bandhigaa qalabka ka hooseeya si aad u wada aragto dhammaan xogta uu adeegsanayo kumbuyuutarka. Macluumaadkani wuxuu waxtar weyn u yeelan karaa ujeedooyinka cilad bixinta.